दाइजो नपाएको भन्दै यातना दिएका कारण त्रिवि अस्पतालमा सुनिताको मृत्यु - Everest Dainik - News from Nepal
दाइजो नपाएको भन्दै यातना दिएका कारण त्रिवि अस्पतालमा सुनिताको मृत्यु
वीरगन्ज, चैत १७ । थप दाइजो नपाएको निहुँमा सुनीता यादवको घरपक्षले उनलाई विवाहको दोस्रो महिनादेखि निरन्तर यातना दिएको खुलेको छ । उनको उपचारकै क्रममा शुक्रबार राति काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ ।
सुनीताले २०६२ असार २ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा जीउज्यानको सुरक्षा माग्दै निवेदन समेत दिएकी थिइन् । त्यसबेला उनका पति डा. सचितानन्द यादवले आइन्दा गल्ती नदोहोर्‍याउने भन्दै लिखितरुपमै माफी मागेको हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख भगवान यादवले बताए । उनी सुनीताका पारिवारिक सदस्य हुन् ।
नारायणी अस्पतालमा कार्यरत सचितानन्दसँग बारा, परवानीपुर–५ की सुनीताको २०५९ फागुन ९ मा विवाह भएको थियो । माइती पक्षले १२ लाख ५० हजार नगद, २ लाख ५० हजार रुपैयाँको गरगहना र अन्य सामान गरी झन्डै २० लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस दुुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
बहिनीलाई पहिलोपल्ट माइती बोलाउन गएका दाजु मनोहरसँग सचितानन्दका आमाबुबाले डाक्टर छोराका लागि एउटा मारुती कार र वीरगन्जमा घर खरिद गर्न भन्दै थप पैसा मागेका थिए । मनोहर आफूसँग त्यति पैसा नभएकाले बुबालाई जानकारी गराउन भन्दै बहिनीलाई घर लिएर आएका थिए । स्थानीय प्रशासनमा सुनीताले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘डा. सचितानन्दले बुवा कमलप्रसाद यादवलाई मारुती कार र घर खरिदका लागि पैसा माग गरेका थिए, बुबाले हाल त्यति धेरै पैसा दिने क्षमता नभएको जवाफ दिएका थिए ।’
याे पनि पढ्नुस पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टको निधन
निवेदन अनुसार घर फर्केपछि उनीमाथि झन् दुर्व्यवहार हुन थाल्यो । २०६२ जेठ २१ मा गरगहना र कपडा खोसेर वीरगन्जको घरबाट निकालिदिए । उनी हरपतगन्जस्थित पुरानो घरमा बस्न थालिन् । एउटा कागजमा सही गर्न नमानेपछि मट्टीतेल छर्केर आगो लगाउने प्रयाससमेत भएको थियो । स्थानीयका अनुसार मट्टीतेल छर्केपछि सुनीता चिच्याउँदै घरबाहिर निस्किइन् । भागेर माइती पुगिन् । त्यसलगत्तै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गरेकी हुन् ।
सचितानन्दले २०६४ सालतिर दाइजोकै लागि सीमावर्ती विहार, रक्सौलकी एक महिलासँग दोस्रो विवाह गरे । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका उनले दाइजो नलिएको र सुनीतामाथि कुटपिट नगरेको दाबी गरेका छन् । ‘विवाह हुँदा म बेहुला थिएँ,’ उनले भनेका छन्, ‘दाइजोको विषयमा मलाई जानकारी भएन ।’
याे पनि पढ्नुस जंगलमा छटपटाइरहेको अवस्थामा एक जोडी फेलाः युवकको मृत्यु, युवती बेहोस
गम्भीर कुटपिट भएको खुलेपछि सोमबार सुनीताको माइती पक्षले सचितानन्दको परिवारविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा उजुरी दिएको थियो । प्रहरीले अब कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिने जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता अनन्तराम शर्माले घटनापछि सचितानन्दको परिवार सम्पर्कविहीन रहेको जनाए।
सुनीताको पक्षमा न्याय माग्दै शनिबार विहान वीरगन्जमा दबाब र्‍याली निकालिएको छ । शिक्षित परिवारमै दाइजोलाई लिएर यस्तो घटना हुनु दुःखद् भएको सहभागीले बताएका थिए। कान्तिपुरदैनिकबाट